D-100's Traffic Load Loading | RayHaber | raillynews
HomeGUUDD-100's Load Traffic ayaa hoos u dhigi doonta
02 / 05 / 2018 GUUD, WADADA, TURKEY
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, Seka Tunnel ee wadada dhinaceeda iyo D-100'deki Adnan Menderes xad dhaafka ah iyo Turgut Ozal overfor ee dhanka jihada Ankara subaxnimadii iyo taraafikada taraafikada si ay usii wadaan inay ka shaqeeyaan yareynta xoojinta. Dowladda Hoose, oo billowday sharci cusub oo taraafikada D-100, waxay yareyn doontaa culeyska taraafikada waxayna awood u siineysaa basaska, basaska iyo gaadiidleyda adeegga inay si fudud u ridaan oo ay raacaan rakaabka. Si looga hortago ciriiriga taraafikada wadada dhinaceeda ee wadada isku xirta Seka, tirada joogsiyada ayaa loo yareeyay 1 waxaana loo sameeyay in gawaarida badan la imaado.
XADGUDUBKA GAADIIDKA MASS
Dowlada Hoose ee Magaalada ayaa badaleysa meesha ay joogsadaan gaadiidka dadweynaha si looga hor istaago muwaadiniinta inay ciriiriga galaan. Marka la eego baaxadda daraasadda, wuxuu sameynayaa haad cusub aagga u dhexeeya D-100 iyo wadada tareenka. Marka mashruuca u dhexeeya Adnan Menderes overpass iyo Turgut Özal overpass la dhammeeyo, wadada D-100 Ankara waxaa laga kordhin doonaa laba haad ilaa seddex haad. Thanks to haadka cusub, oo ay isticmaali doonaan oo kaliya gaadiidka dadweynaha iyo gawaarida adeegga, cufnaanta joogsiga gaadiidka dadweynaha ayaa laga hortagi doonaa. Intaa waxa u dheer, waayeelka iyo dadka naafada ah ee adeegsanaya nidaamka jaranjarooyinka iyo wiishashka wiishka.
Jidka toosan ee TUNNEL WAA KU SAABSAN
Iyada oo laynka cusub lagu dari doono, aagagga hore ee tareenka ayaa sidoo kale la beddeli doonaa. Joogsiga guriga dadweynaha wuxuu kasoo horjeedaa xarunta isuduwaha ISU (Gendarmerie Lodging), halka istaagga Turgut utzal overpass uu ku yaallo meel ka soo horjeedka Xarunta Ganacsiga Ekşi. Dhanka kale, wadada dhinaceeda ayaa istaagan wadada isku xirta Seka tunnel waqtiyada qaar ee maalinta, ka hortaga taraafikada. Si looga hortago ciriiriga taraafikada, laba boosteejo oo ku yaal tunnelka ayaa laga saaray oo meel cusub ayaa laga aasaasay masaafada dhexe ee labada istaag. Markii ay jirto xaalad xad dhaaf ah oo kadhaxeysa xero ku taal nalalka leexinta ee Seka Park ee tunnelka, waxaa dhibaato ka dhacday in toos looga leexdo nalalka. Markay barakac u joogsiga joogsatay, dhibaatadii laga leexday toosinta nalalka taraafikada ayaa la baabi'iyey.
Tunnel ee SEKA
Akcharay Carruurta 6 Million 250 kumaan kun oo maanta ah